प्रहरी श्रीमानले ‘मैले उसलाई भुल्न सकिन’ भन्दै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेकै ठाउँमा गरे प्राण त्या ग ! – My Blog
No Comments on प्रहरी श्रीमानले ‘मैले उसलाई भुल्न सकिन’ भन्दै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेकै ठाउँमा गरे प्राण त्या ग !
एजेन्सी । विवाह भएको दुई महिना पछि एक पुलिसकर्मीले आफ्नी श्रीमतीको मृत्युको खबर सहन सकेनन् र आफ्नो जीवन त्यागे। विशेष कुरा यो हो कि जहां श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो उनी त्यही ठाउँमा गएर झु’ ण्डि ए । घटना भारत छत्तीसगढ बालोदको हो। यहाँ एक सिपाहीले आफ्नी श्रीमतीको निधन सहन नसकेर संसार छोडेका छन् ।
← मोटरसाइकलमा रेनकोटको पा सो लाग्यो युवकको निधन → आमाले नवजात शिशुको ….. फलिन मकै बारीमा